China Yakagadziriswa Mbiriso Tsika Chinese Makwenzi Mishonga Kugadzira uye Fekitori | Bestop
Chinese zita: shen qu
Chirungu Zita: yakashongedzwa mbiriso
ChiLatin Zita: mishonga mbiriso
Shandisa Chikamu: Inogadziriswa nekuwedzera hupfu kana gorosi bran kuPolygonum hydropiper nemimwe mishonga
Basa guru: Spleen uye mudumbu, kugaya uye kuunganidza
Divine Comedy, zita remushonga wechiChinese. Inoviriswa nekuwedzera hupfu kana branichi kuPolygonum hydropiper, Artemisia annua, almond paste, adzuki bhinzi uye nyowani Xanthium sibiricum. Iyo inogadzirwa kutenderera nyika. Yakaenzana kana yakatetepa, iine upamhi hwemasendimita matatu uye pakukora kweinosvika 1cm. Chitarisiko chayo ndeche khaki, chakakora tsanga, chakaomarara, chisina kujeka uye chiri nyore kupaza, chisina kuenzana chikamu chemuchinjikwa, chena-senge, uye shava masara ayo asina kupwanywa uye makobvu esimbi ekuvirisa anogona kuoneka. Yakashata uye inovava.
Spleen uye mudumbu, kugaya uye kuunganidza.
IUsed yekumira kwechikafu, kuzvimba, kusungwa kwemudumbu, kurasikirwa nechido, kurutsa uye manyoka.
1. Zhizhu Piritsi: Inogona kubvisa tsinga uye kusimbisa dumbu, uye vanhu havagone kurega kudya kwenguva yakareba. Imwe kana maviri Atractylode macrocephala koidz (yakakangwa muvhu yero, yakabviswa muvhu), imwe kana maviri asina kusimba machena orenji (yakakangwa nebran, yakabviswa kubran). Kwekupedzisira, iwo lotus mashizha anogadzirwa nemupunga, uye mabhora acho anokwizwa uye akaitwa makuru. Tora mapiritsi makumi mashanu nesupu chena. Qi kudzikira, wedzera orenji svuura imwe kana maviri; Kana paine moto, wedzera imwe kana mbiri coptis; Kana paine sputum, wedzera imwe kana maviri pinellia ternata; Kana paine kutonhora, wedzera mashanu yuan ye ginger yakaomeswa uye San Qian; Kana iwe uine chikafu, wedzera Divine Comedy uye Mai zvevashanu imwe neimwe. ("Jie Gu Jia Zhen")
2. Manyoka akangoerekana aitika mumwedzi yezhizha: kusimbisa spleen nekudziya mudumbu, uye kurapa kukuvara kunokonzerwa nekudya. Qushu Piritsi: Iparadzanise muupfu hwekupedzisira neDivine Comedy (inomesa-yakabikwa) uye Atractylode lancea (yakanyorova mumupunga mipunga husiku, yakabikwa), woiisa mupiritsi hombe. Inwa mapiritsi makumi matatu kana makumi mashanu nguva imwe neimwe, uye unwe mupunga. ("Heji Bureau")
3. Musoro wemhepo uye kurwadziwa kwehuropi: 10 kg yemuti wemuzambiringa, dombo rimwe remvura, migomo mitatu yedhodhi, uye migomo mitatu yemupunga wakakora wekubika. Kana kuchitonhora, mhanyisa-fry iyo Divine Komendi pakupera kwegore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, isa muiri, uye gadzira waini senguva dzose. Mushure memazuva matatu kana mashanu, mushure mekuona furo rapera, ndakabika bhaketi remupunga wakakora ndokurikanda muchitonhorera, ndichimirira kujekeswa. Inwa mwenje diki nguva dzese, uye ziya ziya mushure mekutora. ("Shenghuifang")
Inogona kugadzirwa gore rese.
Chop nyowani Artemisia annua L., nyowani Xanthium sibiricum L. uye nyowani Polygonum hydropiper L. imwe neimwe ine makirogiramu gumi nemaviri; Kukuya bhinzi dzvuku, kupedzisa netiweki yezvidzidzo zvekurapa, kubvisa nekukuya maarumondi, 6 kg imwe neimwe, kusanganisa mushe, kuwedzera 100 kg gorosi bran uye 60 kg yeupfu chena, uchiwedzera huwandu hwakaringana hwemvura, kukanya kuita mapundu, kupetera, kufukidza nehuswa kana masaga , kuvirisa, uye kutora kana yero hyphae ichikura kunze.
Pashure: Wholesale Yetsika Chinese Mushonga Maca
Zvadaro: Yetsika Chinese Mushonga Loquat Shizha
Tsika dzeChinese Herbal Mushonga Sichuan Pepper
Chinese Herbal Mushonga Platycodon Grandiflorum ...
Chinese Herbal Mushonga Fructus Aurantii MuStock
Chinese Herbal Mushonga Wholesale Alpinia Mahofisi ...